Book ihe kwuru: Don't Envy the Bench — njem Lee - Official Site
M na-egwuri Varsity basketball n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Nke ahụ bụ a kpamkpam ezi nkwupụta (ma ọ bụrụ na ị na-amanye m ka m kọwaa okwu play). M gara a obere onwe akwụkwọ, na ọ bụrụ na ị a agadi na ị nwetara a ntụpọ na Varsity otu. M hụrụ n'anya game of basketball, kama m na na na a otutu mma na-ekiri ya karịa akpọ ya. M nwere ike apịa Player na iti mkpu "C'mon!"Na referees ihe niile na-kpakpando nkà. Ma nke ahụ bụ dị ka ọ na-aga. My ụlọ akwụkwọ nwere nke a iju-achị banyere n'ezie na-egwu egwuregwu iji jide nzere, ezie na, otú ahụ ka m manyere ona elu kpọgidere isi m na ihere na Friday ọ bụla n'abalị.
The ila mgbe niile juru na na egwuregwu. Obi tọrọ ya ụtọ nne na nna na ụmụ akwụkwọ-ọtụtụ n'ime ha enyi nke mine- gosiri elu na-akwado otu. Ọ dị mwute, ha eleghị anya mere ihe dị ukwuu nke a dị iche na egwuregwu dị ka m mere. M ga ilekiri n'ime bleachers site n'oge ruo n'oge, -eche ihe niile ahụ nọ na-eche echiche, karịsịa papa m. Echere m na ọ ghọtara na anyị abụọ nọ kpọmkwem n'ebe ahụ na-ekiri, ma m mere nwere mma oche.
Naanị oge m n'ezie mere ya na na n'ala bụ na njedebe nke egwuregwu-ị maara, mgbe ha na-etinye na ụmụ okorobịa ha na-eche ihe ọjọọ n'ihi na. Na-amasị m na-agwa onwe m na ha zọpụta m n'ihi na ndị ikpeazụ sekọnd otú m nwere ike nọrọ ná nchebe na mmeri. Dị ka anyị kwere n'aka na-emegide emegide otu mgbe ikpeazụ ome uzu, Adị m ka m na Player na-snickering n'ime mgbe ha lere m anya ma kwuo, sị, "Good egwuregwu."
Mgbe m pụta si mkpuchi ụlọ mgbe m ịsa, ọ dịghị onye chọrọ a picture m. Ọ dịghị onye nke etiti ụlọ akwụkwọ ụmụaka welie anya-m. Ọ dịghị onye na ma otu adọrọ mmasị m. Gịnị mere? N'ihi na m bụ ihe Spike Lee karịa Michael Jordan. M bụ onye ofufe yi a Jersey. M bụ okorobịa na ndị na-jiri ya mee egwuregwu, ọ dịghịkwa onye anyaụfụ na benchwarmer.
Ga-esi na egwuregwu
M ike mgbe cheta a agbapụ a hà ikuku i papuas na-akpọ aha onye na-amaghị ọrụ player. Ndị ụmụ okorobịa ndị ka ndị ọkachamara, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwere ike ahia n'ebe a basketball player, -akpatakarị ya bụ na Starter, na Ihọd onye bụ si n'ebe si n'ọnụ-apụ na-ikpeazụ ome uzu. Ị ga-echefu mgbe Jordan Switched aka na midair ma ọ bụ mgbe Ray Allen kụrụ na atọ na ome uzu. Ndị bụ ụmụ okorobịa na ị chọrọ ịbụ. Ha na-na na ihe n'oge ndị isi oge, ọ bụghị naanị spectating. Ma n'ihi ihe ụfọdụ anyị na-eme ndị na-abụghị mgbe ọ na-abịa ndụ. Onye ọ bụla chọrọ ịbụ a benchwarmer.
Gịnị ka m bu n'obi mgbe o? Ọ bụrụ na ị gosiri elu na a typical mahadum campus na a gbara ajụjụ ọnụ ụmụ akwụkwọ banyere ihe mgbaru ọsọ ha n'ihi na ọkara afọ agụmakwụkwọ, ị anughi ukwuu banyere ibi ndụ maka Eze. Ị ga-anụ ihe banyere n'echeghị echiche fun karịa na-akpọ a ọrụ ebube akụkọ. Ma eleghị anya, ị ga-ọbụna na-anụ na ụfọdụ 7:00 a.m. mgbagha. M chọrọ iche na ị ga-enweta yiri Ibọrọ na a ụlọ akwụkwọ dị elu ma ọ bụ onye ụlọ ọrụ ụlọ. Anyị nile nwere ihe mgbaru ọsọ na ọchịchọ, ma Chineke ọ bụghị mgbe niile na ha.
M na-atụ gị na-adịghị-ihe m na-ekwu dị ka ekpe ha ikpe ikpe. Na na a na-atụchasị fim trashing ahụ aghọ; Na na na a na-akwado omee-agbalị iji nweta m edoghi nri oke. M ga-agha ụgha ma ọ bụrụ na m kwuru na-esonụ Jesus mgbe niile yiri adọrọ adọrọ. Right ọ bụghị mgbe nile na-eche nri.
M na-echeta a oge, Ozugbo m sonyeere mkpara na chọọchị m, mgbe enyi m niile na-aga ịrụ n'ebe ahụ dị ịrịba music ememme. Na m chọrọ ịbụ na e nwere otú merụsịrị, ma enweghi ike ime ka ọ na n'ihi na ọ dara n'izu mbụ nke m ọrụ ọhụrụ. M na-alụ ọgụ ekworo na obi m. Karịsịa mgbe m hụrụ ha agha chee foto online ha ịtụnanya ahụmahụ.
Mgbe ụfọdụ, anyị ji kwuo otú ahụ na ndụ. Ọ dị mfe anyaụfụ ndị ọzọ, karịsịa mgbe ha na-eme ihe ukwu dị ka ndị enyi m na-eme. Ma ọbụna mgbe anyị maara ndị na-ebi na-ezighị ezi, anyị mgbe ụfọdụ-achọta onwe anyị agụụ isonyere ha. Na na-eme ka esonụ Jesus eche dị ka ịlụ e si na egwuregwu, agaghị na-subbed na. Ma gịnị mere anyị anyaụfụ ndị ọzọ na-ewere ya na anyị na-erite n'ihi ime ihe?
Gịnị mere anyị na-eche na anyị na-adịghị enweta?
Otu n'ime nsogbu anyị bụ na anyị nwere ike na-ahụ ihe ziri ezi n'ihu anyị. Anyị na-atụ uche chebara ihe. Ọ bụ dị ka a igwefoto mgbe ihe n'ihu nọ na-elekwasị anya na ihe niile dị n'azụ nke blurry. Anyị kwesịrị ịgbanwe ihe ndị anyị anya m otú dum picture ga-edo anya.
E nwere ihe bụghị a mmadụ n'ụwa a na-adịghị ọgụ na mgba ahụ nke ọma. Ọ bụ otu n'ime ndị na-esi nke obi anyị n'ezugh'okè. Ma mgbe unu na-atụkwasị youthfulness n'ime akụkụ, ọ na-agbakwụnye ruo ọdachi. One nọ n'agbata afọ ọgụ na mgba na-eje ije ọma, na iri abụọ- somethings ọgụ na mgba ịhụ nke ọma.
Ọ bụghị ihe ijuanya. Ọ bụ akụkụ nke ihe ọ pụtara ịbụ eto eto a dara n'ụwa. Ndụ anyị anọwo na nkenke ma anyị na-na naanị hụrụ nke ukwuu. O siri ike iche n'echiche dum mgbaghoju anya mgbe ị na-na na na naanị hụrụ atọ iberibe. Nke a apụtaghị na anyị kwesịrị flog onwe anyị ihere; ma ọ pụtara na anyị kwesịrị maara, n'ihi mmehie elepụghị anya n'ihu pụrụ ịkpata ọdachi.
Dịtụwo mgbe ị gbalịrị akwọ ụgbọala a snowstorm? The Christmas mgbe mbụ m mụrụ nwa, a egwu snowstorm kụrụ dị ka mụ na nwunye m ụgbọala azụ DC si Pittsburgh. The snow ndị mmadụ gharakwa nnukwu ọkụ ihu na anyị na SUV na dara nnọọ ọsọ na windshield wipers anaghị ahụ ya. My nkwonkwo mkpịsị achazi ọcha dị ka m ahụ ịma jijiji bịara jide wheel; M ghọtara na ndụ nke nwunye m na nwa nọ m n'aka.
M bụ n'ụdị na-egosi. M nwere ike na-ahụ a ole na ole sentimita asatọ n'ihu m ihu, otú ahụ ka m n'ụzọ nkịtị amaghị ebe m na-aga. Amaghị m ihe n'ihu, na aghaghị m nnọọ atụ anya na ọ ga-esi mezuchaa. Nke ahụ abụghị ezigbo mmetụta. Apụghị m ịhụ na ọ bụrụ na e nwere ụgbọ ala kwụsịrị n'ihu ma ọ bụ a mmadụ ikpochapụ anya ya windows na-akwụsị-and-aga okporo ụzọ.
M na-ọbụna kwuru na nkwafu okporo ụzọ ma. Ọkụkụ gị brek pụtara ala ụgbọ ala gị adara dị ka a nwa ewu yi sọks on a tile n'ala. Ị pụrụ ịghọta ihe mere na ọ bụ m dịghị ọkacha mmasị mbanye ebi. M amaghị ihe na a na-amị amị ebe.
Ị mgbe chere banyere otú ọdachi elepụghị anya n'ihu pụrụ ịbụ ná ndụ anyị? Ọ bụrụ na anyị ime ka mkpebi ndị dabeere na ihe ziri ezi n'ihu anyị, anyị na-aghaghị agba ọsọ n'ime ize ndụ. Ọtụtụ n'ime anyị na-agbalị ibi ndụ anyị na ịma banyere ihe na-eme mgbe e mesịrị.
Adịla mgbe a ọzọ ahụ nwere ike iyi ka a ezi echiche na oge, ma ọ ewetara Chineke nkọcha na-eduga ná nzuzu mkpebi. Ihi ụra na enyi gị nwoke ma ọ bụ enyi nwanyị nwere ike iyi ka a mmeri na oge, ma na ụdị mmekọrịta chiri anya na ọ dịghị mgbe pụtara na a ga-enwe iche n'ebe ndị pụrụ iche njikọ nke a alụmdi na nwunye.
Anyị ga-amaba n'ime mmiri iji ndị a na ụdị mkpebi ọzọ ka anyị na-akwụkwọ, ma, ihe bụ, anyị nwere na-eche echiche akamba picture. Mkpebi niile anyị na-eme bụ a obere mpempe a ibu mgbaghoju anya. Na-enweghị na-achọ na chebara ihe maka akwụkwọ, anyị ga-edowe iberibe ọhụma oge ọ bụla. Ọ bụ ọdachi na-akpọrọ ihe a oge na oge ọzọ karịa ndụ ya nile.
*Nke a bụ otu ihe kwuru si n'isi nke atọ nke Njem ọhụrụ akwụkwọ, ebili. Echefula, mgbe ị na tupu-iji Rise site January 26, ị ga-enweta a ụyọkọ onyinye maka free, tinyere a bonus track na emeghị ka ya na album. Ebe a na-niile nkọwa iji gbapụta gị onyinye: http://risebook.tv/preorder
Emanuel • January 15, 2015 na 12:16 pm • zaghachi
M nnukwu music ofufe nke gị ma enweghị m echiche i nwere ike ide otú ezi. May Chineke na-agọzi gị> BTW m si Suriname. gọzie elu
Matt • January 15, 2015 na 1:54 pm • zaghachi
Ị nwere egwu na okwu onye. Jide ka iji!
Ọ bụ ya mere Chileshe • January 16, 2015 na 5:45 Abụ • zaghachi
Ahịrịokwu ikpeazụ nwetara m. Ya mwute jiri a oge na oge karịa ihe dum ndụ. Ihe mbụ bụ fọrọ nke nta mgbe a ngwaahịa nke inwe anyaụfụ ebe otheres nọ ndụ. Ka anyị na-ekele Chineke maka ebe anyị nọ. E nwere ihe a mere anyị na-ahụ. Otú ọ dị, anyị mkpa ịghọta ya site na ya niile.
Kiggundu Brian • January 16, 2015 na 2:19 pm • zaghachi
Chaị!!.Ike na-eche na-akwụkwọ a ma olee otú anyị ga-esi ha ala n'ebe a na #uganda Africa
Kiggundu Brian • January 16, 2015 na 2:24 pm • zaghachi
Chaị…!!! n'anya nke a dị ka gị music mgbe niile na-akpali m na dị nnọọ ike na-eche gettin a ma olee otú ala ebe a na Uganda Africa!.Ka onyenwe agọzi gị
Kshntiki • January 16, 2015 na 9:13 pm • zaghachi
Nke a kwuru mere ka m na-eche nke alot of nhọrọ m nade ná ndụ m.
Carlton • January 17, 2015 na 1:19 pm • zaghachi
ụtọ kwuru ezigbo ihe na nke ukwuu, dịkwa #stayblessed.
Gao • January 18, 2015 na 1:50 Abụ • zaghachi
Oh!Chineke ma ọ bụrụ na m nwere ike naanị akwụkwọ a…a ibe bụ egwu na ugbu a na m na-eche na nnukwu picture(akwụkwọ)..#na u anw u ssingsToU
JieWoo • January 19, 2015 na 2:39 pm • zaghachi
CHAỊ! chọtara azịza!!! Daalụ mayne! GBU! Ekele si Germany!
aganụ • January 20, 2015 na 2:07 Abụ • zaghachi
njem Lee, M nwụnahụrụ m n'ụzọ ndị na m Journey Onyenwe anyị ozi. M na-eto a Christian, ma kwaga n'ebe ozizi ya. Ọ bụ mgbe m gere ntị gị Good Life album na di na nwunye nke okwuchukwu youtube na duziri m ndabere na ntụziaka nke Jehova. M chọrọ ikwu na-ekele gị m brotha.
tamsyn • December 28, 2015 na 7:35 Abụ • zaghachi
dearest Njem. A ezi onye ndú. Your akụkọ chetaara m mma na m na-na na hụrụ na mmekọrịta mụ na Jizọs nakwa otú mkpa obere mkpebi ga-anọgide na-ede m aka. Anyị na-kara aka na-enwe a echiche nke Royal Jesus. Ka ọ bụla na-agụ chọta akụ a eze akụ igbe a na-akpọ Bilie. Ekpere niile si Cape Town, South Africa.